DF oo beenisay eeda askarta lagu laayay dagaalkii Waqooyiga Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo beenisay eeda askarta lagu laayay dagaalkii Waqooyiga Itoobiya
Dowladda Federaalka ayaa beenisay wararka sheegaya in Askar Soomaaliyeed lagu laayay dagaalkii Waqooyiga Itoobiya.
MUQDISHO - Dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku sheegtay wararka sheegaya in Askar Soomaaliyeed oo tababar loogu diray dalka Eritrea ay ku dhinteen dagaalka ciidamada difaaca Qaranka Itoobiya iyo TPLF.
Wasiirka Wasaarradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in aysan jirin Askar Soomaaliyeed oo ku lug yeeshay dagaalka Itoobiya ama lagu dilay, sida lagu shaaciyay telefishinka Qaranka.
"Ma jiraan Askar Soomaaliyeed oo Itoobiya naga dalbatay ama ka qeyb qaatay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreyga, waa warar mala awaal ah, waana waxba kama jiraan" ayuu yiri Wasiir Dubbe.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeynayaa in ay dhalinyarro Soomaaliyeed ay u dirtay dagaalka Itoobiya, halkaaso ay ku dhinteen ku dhawaad 400 oo dhalinyarro, Keydmedia Online ayaa waxaa horyaala qaar kamid ah dhalinyaraddii ku dhimatay dagaalka, waxeyna KON haatan wadaa baaritaan ku saabsan arintaan.
Dhacdadan ku saabsan Askarta Soomaaliyeed ee markii horeba sida qarsoodida ah loo geeyay dalka Eratariya haddana looga faa'iideystay dagaalkii Tikreega lagu qaaday ayaa walwal ku abuurtay waalidiin Soomaaliyeed kuwaasoo caruurtooda nolol iyo geeri waxa ay ku sugan yihiin aan ka war qabin.